I-Steelers ibonakalise nje ukuba zininzi ngokwenyani - I-Nfl
I-Steelers ibonakalise nje ukuba zininzi ngokwenyani
Yonke into ekufuneka uyazi ngeVeki yesi-7 yexesha le-2020 yeNFL
Ukusukela ukudityaniswa kweNFL-AFL, bekukho ukhuphiswano lwesithandathu olubonisa amaqela ama-5-0. Inkqubo ye- abaphumeleleyo abahlanu bokuqala bonke bafikelele kwi Super Bowl. Kwaye ngelixa isiphelo sesithandathu, i-2020 Pittsburgh Steelers, ingekagqitywa, i-27-24 yabo iphumelele i-Titans ngeCawa ibonakalisile ukuba banomfanekiso osemthethweni ngokwenza okufanayo.
IPittsburgh Ndifuna ukuseta ithoni Kwangoko ngokuchasene neTennessee, kwaye yenzekile. I-Steelers yahamba ngesiqingatha sokuqala, ixhomekeke kukhuseleko lwayo ngelixa iqhuba ixesha elide, elinemveliso ehlaselayo ethintela uDerrick Henry kunye no-Co ekwenzeni impembelelo yokuqala. IiTitans zazinendawo yokubeka irekhodi kwiveki ephelileyo ngokuchasene neeTeans, kodwa loo mzuzu awuzange wenze kulo mdlalo. Uhlaselo olunzima lukaTennessee lwahamba kathathu lwaphuma kabini kwisibini nesiqingatha sokuqala semoto kwaye aluphumelelanga ukuguqula inzame yesine-phantsi kwenye, ivumela i-Steelers-efumana amanqaku kwimpahla yabo yokuqala yokuqala-ukuba itsibe 24-7 ekhokelayo. Ngaphandle kokulahleka kwe-starbackbacker u-Devin Bush kwi-ACL eqhekekileyo kwiveki ephelileyo, i-Steelers defense ayizange yeqe ukubetha, ibambe uHenry kwii-75 iiyadi kwi-20 ithwala nje iveki enye emva kokuba ebalekele iiyadi ezingama-212.
Ngaphandle kwesiqalo esihle, nangona kunjalo, iPittsburgh ijonge kude kude ngokugqibeleleyo kwisiqingatha sesibini. AbakwaSteelers bakhaba inqaku lomhlaba kwikota yabo yesithathu yokuvula ukuze bathathe u-27-7, kodwa enye into yaya apho. Ukuzikhusela kukaTennessee kwahlala phantsi, kwanyanzeleka ipere, kwaye kwathathwa uBen Roethlisberger amatyeli amabini. Ezo zinto zitshintshileyo zanceda iiTitans ukuba zihlale zikumgama omde kwaye zabavumela ukuba bathembele kuhlaselo lwabo olukhawulezayo. Ukuqhawulwa kwesibini kwesiqingatha sika-Roethlisberger-ukukhetha i-tip-drill kwindawo yokugqibela eyonakalise ithuba elinokubakho lokufumana amanqaku-phantse kwakhokelela ekubeni iTennessee ibambe umdlalo. Kodwa uStephen Gostkowski waphoswa yinjongo yenkundla yeeyadi ezingama-45 walondoloza ukuqala kukaSteelers 'ngo-6-0-yeyona nto bavulekileyo kuyo ukusukela kwixesha lonyaka we-1978.
Eyona nto yoyikekayo ngeli xesha leHalloween ziiFalcons ezinokhokelo
Umqeqeshi we-Steelers uMike Tomlin uxelele oonondaba emva komdlalo ukuba ukuphuma ngeCawa kwakungeyonto egqibeleleyo. Kodwa, uqaphele , Sigqibelele ngokwembono.
IPittsburgh ihlala iliqela elingapheliyo kwi-AFC njengokuba ixesha lonyaka lisondela kwinqanaba eliphakathi. Ukuba bekukho naziphi na iingxaki eziqhubekayo malunga nokusemthethweni kwabakwa-Steelers, kufuneka baphantse babekwe ekuphumleni. I-Steelers yimbangi yeSuper Bowl, kwaye kufanelekile ukuba ithathelwe ingqalelo kwimpefumlo efanayo neeNkosi kunye neRavens phezulu kwinkomfa. Ukusebenza kwangeCawa kubonakalise ukuba ekuphela kwento enokulinciphisa eli qela lilo uqobo.
I-Pittsburgh ingenele ukhuphiswano olulinganisa amanqaku angama-31.2 ngomdlalo ngamnye (owesine kwi-NFL), okuthetha ukuba eli qela linokukhuphisana nezona zenzo ziphambili zeligi. Ezomkhosi zingene ngeCawa zibekwe kwindawo yesibini Metric yabangaphandle kwi-DVOA , kwaye sele kuvelise uxinzelelo ngakumbi kunalo naliphi na elinye iqela kwiligi. I-Titans isenokungabi lelona qela loyikekayo kwiligi, kodwa banikezela ngovavanyo lwe-litmus lokuqala lwe-Steelers ukubonisa ukuba basemthethweni. I-Pittsburgh iyigqithile, kwaye yayisendleleni yokwenza njalo ngemibala ebalekayo kude kube sisiqingatha sesibini. Kukho ezinye iimvavanyo ezizayo, kubandakanya i-matchup kunye neembangi zeRavens kwiveki ezayo, kodwa ukufumana uloyiso kwilingo lokuqala kukukhululeka okukhulu ePittsburgh.
Kusekho imibuzo ecacileyo malunga namathuba kaSteelers okuvela njengeyona nto ayithandayo yokuphumelela i-AFC. Uninzi lwalo luxhomekeke kwingalo kaRoethlisberger, ogqibe ukupasa okungama-32 kwama-49 (iipesenti ezingama-65.3) kwiiyadi ezingama-268, ii-touchdown ezimbini, kunye neendlela ezintathu ngeCawa. Umdlali oneminyaka engama-38 ubedlala kakuhle ukuza kuthi ga ngoku kule sizini-ungene kukhuphiswano ukuze afikelele kwinqanaba eliphezulu lomsebenzi wokugqiba ipesenti (69.1) kwaye waphosa intshinga enye. Kodwa weza nakwiveki ye-21st kwi-QBR (60.0) nakwi-24th in iingongoma ezilindelekileyo zongezwa (24.1) phakathi kwabahambi abaphumeleleyo. Ukongeza kwizinto ezintathu azikhethileyo ngeCawa, inqanaba lakhe lokugqibezela ibingamanqaku e-5.2 ngezantsi kulindelwe, ye Izibalo ezilandelayo zeGen. Ubunzulu bomndilili wethagethi (iiyadi ezi-5.6) ubekwe phakathi kwezona zisezantsi zivelisiweyo kule veki. Ezinye zazo zinokubangelwa sisicwangciso somdlalo kwaye uRoethlisberger waphinda wadibana noDiontae Johnson, osandula ukujongana nokwenzakala emqolo. Ezinye zisenokuba zibangelwe lulo naluphi na uhlengahlengiso olwenziwe ngumqeqeshi weTitans uMike Vrabel ngexesha lekhefu, njengeTennessee ivelise iingcinezelo ezintlanu zeQB kwaye wanika uRoethlisberger ixesha elincinci lokuhlala epokothweni. Nokuba kunjalo, uRoethlisberger akazange acofe iithagethi zakhe kwisiqingatha sesibini kwaye anyanzele ukuphosa okanye ukuphosa abafumanayo. Ukuziphatha kwakhe gwenxa kudlale indima ekuvumela iTennessee ukuba ibuyele kumdlalo.
Ukuba uRoethlisberger angakwazi ukuhambisa nayiphi na into encinci yefom yakhe yangaphambili, amandla eSteelers anokungabinamda. Ngaphandle kwe-QB, akukho mininzi imingxunya kakhulu ekubunjweni kwePittsburgh. Ngokuqinisekileyo, umdlalo obalekayo we-Steelers umndilili, kodwa abadlali babo abanetyala benza enye yezona zixhobo zinamandla zokufumana i-NFL, kwaye ukuzikhusela kwabo kuye kwangqina ukuba yenye yeeligi.
Kukho ixesha elininzi lokudlala, kwaye i-matchup yeveki ezayo ngokuchasene neRavens iya kusebenza njengenye inyathelo lokufumana amandla ePittsburgh. Kodwa okwangoku, kucacile: ii-Steelers zininzi kakhulu.
yintoni indlela eya ebukumkanini
U-richard sherman umbhaki we-mayfield
Amagama amatye angama-6 angapheliyo
Iimpawu eziphambili zokufowuna kwemipu